Nahemotra Ho Amin’ity Taona 2017 Ity Ny Fifanarahana Momba Ny Olan’i Sipra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Janoary 2017 4:55 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, bahasa Indonesia, English
Faritry ny Firenena Mikambana, Sipra. Creative commons.
Tamin'ny 20 Novambra, nihaona fanindroany tao Mont-Pelerin, Soisa ny Filoha Siprioty Nicos Anastasiades sy ny mpitarika Siprioty Tiorka Mustafa Akinci, mba hiverina hiresaka indray ny olan'i Sipra. Nifarana tsy nisy fifanarahana ny fifampiresahana, izay naharitra roa andro, ary niafara tamin'ny fifanomezan-tsiny teo amin'ny andaniny sy ny ankilany.
Nizarazara ny firenen'i Sipra nanomboka tamin'ny taona 1974, taorian'ny fanafihan'i Torkia nateraky ny fitomboan'ny adim-poko sy ny fanonganam-panjakana tao amin'ny nosy, notohanan'ny fitondrana miaramila nitondra an'i Gresy tamin'izany fotoana izany. Taorian'ny fanafihana, nijanona tao amin'ny nosy ny tafika Tiorka ary nanambara ny tenany ny Repoblika Tiorka ao Sipra Avaratra (TRNC), andrim-panjakana izay i Torkia ihany no mankatoa azy, hitantana ny faritra avaratry ny nosy. Nanomboka teo, tsy dia nisy ny fivoarana mikasika ny fampihavanana ilay nosy Mediteraneana. Nosokajiana toy ny “vintana farany ” ho fahombiazan'ny famahana ny olana ny fifampiraharahana amin'izao fotoana izao.
In Switzerland on 7-11 Nov our goal will be to solve #CyProb in 2016. Will discuss territory & all other outstanding issues interdependently
After a week's recess, a sunny #MontPelerin welcomes #Cyprus leaders & negotiating teams back for continued negotiations. #UnitedByHope pic.twitter.com/vopqCkq3RF
Taorian'ny fiatoana herinandro, faly mandray ireo filoha sy ny ekipan'ny fifampiraharahana Sipra tonga hanohy ny fifanarahana indray i #MontPelerin mibaliaka masoandro.
Taorian'ny fiaingàna tao Mont-Pelerin, niampanga ny Syprioty-Grika ho misisika amin'ny fitakiana sisintany tafahoatra sy ny olana hafa ny mpitondra tenin'i Akinci. Eny tokoa, naelin'ny olona sasany talohan'ny fifampiresahana mihitsy aza izany fomba fijery izany ary hita tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny media sosialy sy ny valinteny tamin'ny lahatsoratra antserasera.
Etsy andaniny, sahiran-tsaina tanteraka ny Grika-Sypriota noho i Torkia nomena zo hitsabaka ara-miaramila sy hametraka tafika ao amin'ny nosy, izay notakian'ny Tiorka-Syprioty amin'izay rehetra mety ho fifanarahana. Nilaza ny Grika-Syprioty fa mety hanohintohina ny fiandrianan'ny nosy izany.
Ho an'ny Grika-Syprioty sasany mpitsikera ny fifampiresehana, nanamarina ny tombatomban'izy ireo hatry ny ela momba ny toetry ny fifampiraharahana ny zava-nitranga vao haingana. Naneho hevitra momba izany indrindra ny mpisera iray antsoina hoe EntimosKritiss:
Ankoatra izany, nilaza ny hafa fa ny rafi-pitondrana vaovao natolotra dia hiteraka famoronana “efi-trano, parlemanta sy loholona isan-karazany, manana rafi-pitsipahana tsy azo ivalozana (veto) mitohy” izay hahatonga ny “fanjakana” vaovao tsy ho afa-miasa dieny hatrany amboalohany. Nilaza izy ireo fa tsy tsy misy tombony ho azon'ny Grika-Syprioty mihitsy avy amin'izany ary mety hitarika fandosirana faobe ny nosy. Ireo ahiahy ireo dia ny lahatsoratra avy amin'i Aris Petasis nivoaka tao amin'ny tranonkalan'i Michalis Ignatiou, Grika mpanao gazety Grika no nitondra azy:
Nilaza koa ny lahatsoratra fa ny olona mety handao ny firenena dia mety hoe dokotera, injeniera ary mpandraharaha mpanankarena. Heverina fa maniry hiaina amin'ny toerana manana fahamarinan-toerana ireo vondrona ireo fa tsy hiaina ao anatin'ny toe-piainana tsy azo antoka sy faharefoana ara-politika izay mety hisy ao Sipra eo ambanin'ity volavolan-drafi-pitondrana naroso ity.
Ahiahy hafa lehibe ho an'ny roa tonta ny hoe ho afaka hiara-hiaina am-pilaminana ao amin'ny nosy ve ireo vondrom-piarahamonina roa izay efa samy nanana ny fiainany nandritra ny 40 taona mahery ireo. Tamin'ny Novambra 2015, notafihan'ny vondrona mpianatra nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny tsingerintaonan'ny fanambarana samirery ny fahaleovantenany nataon'ny fanjakana Tiorka-Syprioty ny Tiorka-Syprioty roa, zava-nitranga nomelohin'ny Filohan'i Sipra Anastasiades. Ankoatra izany, tamin'ny Mey 2016, Tiorka-Syprioty telo no voalaza fa notafihan'ny vondrona mpitondra môtô Grika-Syprioty. Vao haingana indrindra, nisy ny fanafihana Tiorka-Syprioty mpamily taxi tamin'ny 21 Novambra tao Nikôzia. Raha mbola tsy fantatra mazava kosa na noho ny antony ara-politika ity fanafihana farany ity, nahatonga ny olona sasany hanahy ny mety hisian'ny ady eo amin'ny vondrona roa tonta ny herisetra tahaka izany raha vao tafakambana izy ireo.
Taorian'ny fifampiresahana fihodinana faharoa tao Mont-Pelerin, samy nanaiky ny roa tonta fa hanatrika ny fihaonana an-tampony, izay notontosaina tany Genève tamin'ny 9 ka hatramin'ny 12 Janoary 2017. Ahitana ny Fanjakana Mikambana (UK) ihany koa ny fihaonana an-tampony raha “nasaina kosa ireo antoko voakasika hafa raha ilaina”, araka ny tati-baovao avy amin'ny mpanao gazety Grika manonona ny Iraka Manokan'ny Firenena Mikambana ho an'i Sipra, Espen Barth Eide. Fotoana lehibe amin'ny fifampiraharahana ny fihaonambe izay handinihana ny olana lehibe rehetra.